'निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरे ५० बर्ष पछाडि पर्छ' (भिडियो अन्तर्वार्ता) | Kendrabindu Nepal Online News
२५ फाल्गुन २०७५, शनिबार १२:३३
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को महाधिबेशन नजिकिएको छ । आगामी चैत २८ र २९ गते तोकिएको महाधिबेशनको तयारी तिव्रताका साथ भईरहेको छ । महाधिबेशन नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ । हाल केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका डीके ढुंगाना पनि केन्द्रिय अध्यक्षका प्रत्यासी हुन् । ढुंगानाले प्याब्सनको हितका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेका छन् । प्रस्तुत छ, ढुंगानाको उम्मेदवारी, उनको भिजन, सरकारी नीति, प्याब्सनको आगामी यात्रा लगायतका बारेमा ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्याब्सनको चुनावमा अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ, चुनाव कतिको लागेको छ ?
प्याब्सन देशभरि छरिएर रहेका नीजि विद्यालयको छाता संगठन हो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तित्वहरुले भावी नेतृत्वको चासो देखाउनु स्वभाविक हो । त्यो सँग चुनावी प्रक्रिया जोडिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा आएका कानुन, नयाँ नीति, विद्यालयको अपेक्षा र राज्यले बनाउने नीति निर्माणका बारेमा नयाँ योजना बनाउन र नयाँ नेतृत्वका लागि प्याब्सनको चुनाव हुन लागेको हो ।
प्याब्सनमा राजनीति मिसिएको छ कि छैन ?
प्याब्सन एउटा शैक्षिक व्यावसायिकहरुको संगठन हो । जहाँ ठूलो लगानी रहेको छ । सोको प्रवद्र्धन र विकास गर्नको लागि बनेको संस्था हो । प्याब्सन पुरै पार्टीसँग सम्बन्धित छैन तर केही भने राजनीतिमा संलग्न छन् ।
तपाईको चुनाव जित्ने आधार के छ ?
मेरा चुनाव जित्ने २/३ वटा आधारहरु छन् । म सँग २० वर्ष लामो प्याब्सनको अनुभव छ । शिक्षा क्षेत्रमा मेरो २ दशकको अनुभव पनि छ । मसँग प्याब्सनको तल्लो निकायबाट लडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको यात्रा बारे राम्रो अनुभव छ । यसका साथै राष्ट्रिय संगठनको पनि मसँग राम्रो अनुभव छ । यति मात्रै होईन मसँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । साथै विद्यालयका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने योजना पनि मसँग छ । साथै म सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानको पहल गर्न सक्छु । त्यसैले मसँग प्याब्सनको भविष्यलाई उठाउन सक्छु भन्ने आँट छ त्यसैले पनि म प्याब्सनको भावी अध्यक्ष बन्न सक्छु ।
तपाईको मूल नारा के छ ?
नारा भन्दा पनि मसँग एउटा स्पष्ट नीति छ । आज दूरदराजमा रहेका स साना विद्यालयदेखि लिएर शहरमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विद्यालयहरुको लगानी सुरक्षा, प्रवद्र्धन र स्वदेश र विदेशमा शैक्षिक अभियानबाट नेपाललाई चिनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।
प्याब्सनको नाम पछिल्लो समय त्यति सुनिदैन । यसलाई उठाउने फर्मुला के छ तपाईसँग ?
मिडियाहरुमा हामी यो भन्दा अगाडि धेरै आउने गरेका थियौँ । तर पछिल्लो समय हामी मिडियाबाजी गर्दै हिँडेका छैनौँ । त्यसको कारणले पनि हामी चर्चामा नआउनुको एउटा कारण हुन सक्छ । अर्काे कुरा पछिल्लो समय कुनै त्यस्तो ‘इस्यु’ नआउनुको कारण पनि हामी चर्चामा रहेका छैनौँ ।
प्रधानमन्त्रीले अबको १० वर्षमा निजी स्कुल खाली हुन्छ भन्नु भएको छ, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
प्रधानमन्त्रीज्युले भन्नु भएको कुरा खाली गर्ने नभएर सामुदायिक विद्यालय पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । तर, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयहरुसँग बराबर गराउनको लागि अहिलेको भन्दा दोब्बर लगानी गर्दा पनि गाह्रो छ ।
सरकारले बनाएको नयाँ नीतिमा सकारात्मक कुरा कति छन् र सुधार गर्नुपर्ने के छ ?
नीति बनाउनु र शिक्षालाई सुधार गर्नु सरकारको योजनाभित्र पर्छ । संकुचित मानसिकताबाट त्यो प्रकारको सूचना बाहिर आएको हो । अहिले श्रम बेच्न ५० लाख लगभग नेपालीहरु बाहिर गएका छन् भने बुद्धि बेच्न ८/९ लाख मानिसहरु बाहिर गएका छन् । हामी नेपालमै शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ । यदि हामीलाई नै सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्छ भने भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो घाटा हुनु हो र शिक्षालाई निरुत्साहित गर्न खोजिँदै छ भने फेरि नेपाल ५० वर्ष पछाडि पर्छ ।
तपाईले चुनाव जिते के हुन्छ ? र, नजिते के हुन्छ ?
चुनाव जितेँ भने समग्र विद्यालयहरुले सुरक्षित महशुस गर्न पाउँछन् । र, मैले हारेँ भने मैले आफ्नो ब्यावसायलाई समय दिन सक्छु । आफ्नो व्यावसायलाई राम्रो तरिकाले स्याहार गर्न सक्छु ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
सम्पुर्ण साथीहरुलाई तपाईहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न म खट्न तयार छु । पेशागत व्यावसायिक समुहलाई बिश्वास गर्नुहुनेछ र उचित नेतृत्वलाई छान्नु हुनेछ भन्ने बिश्वास राखेको छु ।
DK Dhungana, pabson election
Prevबलात्कृत ९७ बालिकामध्ये ९ जना बाबुबाटै बलात्कृत !
प्रहरी अधिकृतलाई बञ्जीजम्प अनिवार्यNext